Xaflada xilwareejinta golahii 5aad ee dalada dhalinyarda Somaliland ee SONYO | lughayanews
Xaflada xilwareejinta golahii 5aad ee dalada dhalinyarda Somaliland ee SONYO
Hargaisa (lughaya) Munaasibad baladhan oo ay xilka kula kala wareegayeen gudooiye yaasha dalada dhalinyarda Somaliland ee SONYO ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargaisa.
munaasibadani ayaa waxa goob joog ahaa wasiirka wasaarda dhalinyarada Somaliland , Afhayeenka Madaxtooyada , Gudoomiyaha hayada ladagaalanka musuqmaasuqa, labada gudoomiye ee Dalada SONYO ,xildhibaano iyo dadwayne aad u fara badan
Waxa ugu harayn halkaasi kahadlay Gudoomiyaha Xilka Wareejinaya mudane axmed Cabdi wacays waxanu ka warbixiyey xaalada guud ee dalada SONYO isaga oo xusay in ay hawlo badan qabteen mudadii labda sano ahayd ee ay xilka hayeen isaga iyo golahiisa
waxakale oo isaguna hakaa kahadlay Gudoomiyaha Cusub Ee lasoo doortay mudane Mubaarib Ismaaciil oo kamahad celiyey sida wanaagsan Ee xilka loogu wareejiyey
wuxuna balan qaaday in uu hirgalindoono barnaamijyada qorshaysan ee Dalada
Wasiirka dhalinyaradda, ciyaaraha iyo dalxiiska Somaliland Md. Cali Siciid Raygal oo xafladaasi ka hadlay ayaa tafaasiil ka bixiyay waxqabadkii golihii sare ee SONYO ee xilka wareejinayay oo uu aad u ammaanay, waxaanu yidhi “Waxaan ku faraxsan nahay inaanu ka soo qeyb gallo xafladan qiimaha badan ee xil wareejinta Golaha sare ee SONYO ee hore iyo kuwa cusub.Runtii Golihii hore ee sare ee SONYO aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa iyadoo runtii intii aan wasaaradda joogay aad iyo aad iila soo shaqeeyay oo shaqooyin badan ila soo qabtay. Waxa kale oo aan uga mahad celinayaa shaqadda wanaagsan ee ay dhalinyaradda u soo qabteen. Waxay soo sameeyeen nidaam, horumar iyo isku xidhkii ay muujiyeen intii ay shaqadda hayeen. Golihii hore waxay ahaayeen rag shaqadda u bislaaday oo karti leh. “
Wasiirka oo hadalkiisa sii watay wuxuu intaasi ku ladhay“Waxay ahaayeen rag si wanaagsan u fahamsan shaqada ay dhalinyaradda u hayaan iyo isku xidhka Wasaaradda dhalinyaraddana ku fiican ayay ahaayeen. Waxa weeye rag ay taariikhdu qori doonto oo aan la iloobi Karin. Waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan idiinka mahad celinayaa sidaas wanaagsan ee aad xilka u soo hayseen iyo sida wanaagsan ee aad u wareejiseen. Waxa kale oo aan idinka rajaynayaa inaad Golaha cusubna la shaqayn doontaan oo aad waayo aragnimadda iyo khibradiina aad ku kordhin doontaan.”
Md. Cali Siciid Raygal waxa uu dar-daaran iyo guubaabo u soo jeediyay Golaha cusub ee SONYO ee xilkala wareegay, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Golaha cusub ee la doortay waa xubno sidaan maqlay aad u wanaagsan, waxaanan Guddoomiyaha Dallada SONYO iyo Golaha sareba u rajaynayaa inay sidii u wadaan wada shaqayntii, isku xidhkii dhalinyaradda iyo wada shaqayntii wanaagsanayd ee ay wasaaradda la lahaayeen Golihii hore halkii ka sii wadi doonaan. Annagana wasaarad ahaan waxa naga go’an inaanu sidii aanu Golihii horeba ula shaqaynaynay iyagana ula shaqeyno. Waxaad tihiin dalladda Guud ee dhalinyaradda Somaliland oo dhan magaca iyo kaalinta intaasi leeg ayaad u taagan tihiin.”
Wasiirku waxa uu u soo jeediyay inay Golaha sare ee SONYO ay mansabka Guddoomiye Ku xigeenka ka dhigaan gabadh haddii ay suurto-gal tahay.
“Xukuumadda Somaliland waxa ka go’an inay isbar-bar taagto, inay horumariso iyo inay aqoonsato dhalinyarradda oo mujtamaca Somaliland ka ah 65%. Maadaama arrintaasi madaxweynaha iyo xukuumadda ka go’an tahay wax la qabadka dhalinyarradda, innagana dhalinyaro ahaan wax baa inagu waajib ah inaynu fahamno doorkeena si aanu gaab banaani u soo bixin,”ayuu yidhi Wasiir Raygal.
“Tusaale haddii aan idiin soo qaado ciyaarihii sanadkan goboladda Somaliland loo qaban lahaa dib ayaynu u dhignay sifo kasta ha noqotee. Waxa laga yaabaa in dhibaatooyinka ugu badan ee laga qaban kari waayay inay dhalinyaraddu u badan tahay. Markaa waxyaabaha loo baahan yahay inaynu wax ka qabano oo u tabaabushaysano arrintaasi ayaa ka mid ah. Haddii aanay dhalinyaraddu garan qabyaaladdu waxay tahay wax allaale iyo wax inoo hagaagayaa ma jirto,”ayuu yidhi Wasiirka dhalinyaradda, ciyaaraha iyo dalxiis
gabagabadii xafladaasi ayaa waxa shahaadooyin lagu gudoonsiiyey dhamaan xubnihii hore ee xilka wareejiyey.
« Dagaal xalay ka dhacay duleedka Laascaanood iyo Saamaynta Xukuumada Siiranyo DAAWO Deeq lacago ah oo la soo gaadhsiiyey Eheladii iyo dadkii ku dhaawacmay doorashadii degmada lughay »